ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ရှည်အင်္ကျီလက်နှင့်အတူအပျော့အကာအကွယ်ခဲကုတ်အင်္ကျီ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chen က lu
ကာကှယျတစ်ခုတည်း PVC MDF
အိပ်ရာ-type အမျိုးအစား multifold ခဲဒိုင်းလွှားကို
soft X ကိုရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု
ultra ပျော့ X-Ray ကာကွယ်မှု
soft တင်သွင်း X-Ray ကာကွယ်မှု
အကာအကွယ် Intervenient ဓါတ်ရောင်ခြည် ...
Chen က lu ရဲ့အသစ်အကာအကွယ်ခဲရော်ဘာဦးထုပ်bနိုင်ပါတယ် ...
Chen က lu ရဲ့အသစ် Semi-စွပ်အိတ် Single-တဖက်သတ် Anti-ra ...
ဆိပ်ကမ်း: Qingdao or Yantai
ဒါဟာသဘာဝရော်ဘာ, အဝါရောင် danfen ကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။
ခဲနှင့်ညီမျှ: အထူးအခြေအနေများအပေါ် မူတည်. 0.25 MMPB, 0.35 MMPB, 0.5mmpb, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ညီမျှ။ အဓိကအားဖြင့် X-Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုအသုံးပြုသူများကာကွယ်မှုစီးရီးထုတ်ကုန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များရွေးနိုင်သည်။ internal Multi-layer ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသစ်ကိုအကာအကွယ်ပစ္စည်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းဆောင်မှု;
အဆိုပါအပြင်ပန်းထည်အကြမ်းခံများနှင့်အကြမ်းခံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရေစိုခံခြင်းနှင့် antistatic ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။
Size: S, M, L ကိုအထူးနံပါတ်များစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ရှန်ဒေါင်း Chen က lu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာတွဲဖက်။ , LTD မှကုမ္ပဏီပြည့်စုံအရည်အချင်းများ, X-ray အကာအကွယ်အဝတ်အစားအသစ်အမျိုးအစားအပါအဝင်အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေ၏ X ကိုရောင်ခြည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအကာအကွယ်အဝတ်အစား (ခဲရော်ဘာအဝတ်အစား) တွင်အထူးပြုကုမ္ပဏီအမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါသည် ဝယ်ဖို့စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေရနိုင်! အသေးစိတျကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်!
တယ်လီဖုန်း: 0535-8982222 / 8522678
ယခင်: ခဲအကာအကွယ်လက်မောင်းကာကွယ်မှုလက်မောင်း၏ Chen က lu ရဲ့အသစ်အမျိုးအစား
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါပျော့အကာအကွယ်ခဲအကြံပေးအဖွဲ့ Anti-wear ဖြစ်ပါသည်
X ကို Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ခဲအဝတ်အစား
တဦးတည်းဘက်မှာ Long ကစွပ်အိတ်ခဲကုတ်အင်္ကျီ
X ကို Ray ခဲအဝတ်အထည်
X ကို Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဝတ်အစား
X ကို Ray ကာကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာ
X ကို Ray ကာကွယ်ခဲအဝတ်အထည်
X-Ray Shield ကို Gonad
Chen က lu ရဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်-အထောက်အထားအင်္ကျီအကောင်း s ကိုရှိပါတယ် ...
အဆိုပါပျော့အကာအကွယ်ခဲအကြံပေးအဖွဲ့ Anti-wear ဖြစ်ပါသည်
Chen က lu အနည်းငယ်ပစ္စည်းများအကာအကွယ်ခဲဂျာကင်အင်္ကျီ ...
ရှန်ဒေါင်း Chen က lu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများပူးတွဲ။ , LTD
E-mail ကို: admin@sdchenlu.com